Paragoay : Mba Hivelomana, Mibodo Ireo Tany Tsy Misy Mampiasa Ireo Taranaka Tantsaha · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Caleb O'Brien
Voadika ny 27 Febroary 2018 2:10 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, English, Português, Italiano, Español
Mariano Castro miaraka amin'ny vokatra voatavo be. Sary avy amin'i Melanio Pepangi. Nahazoana alàlana.
Ito ambany ito dia dikanà tantara nafohezina novokarin'i Kurtural ary naverina navoaka ato amin'ny Global Voices rehefa nahazoana alàlana tamin'ny mpanoratra. Izy ity dia ampahany amin'ny andian-dahatsoratra ” Tsy mankany amin'ny tsena lehibe ny tsy manana tany,” izay haverin'ny Global Voices ho avoaka indray.
Amin'ny maha-lehilahy tanora kokoa azy dia nanampy tamin'ny fananganana ny vondrom-piarahamonina paragoaianan'i Yby Pytã i Mariano Castro. Ankehitriny izy dia manana trano misy efitra dimy sy toeram-piompiana iray ahitàna fiompiana akoho, fiompiana kisoa, ombivavy sivy sy toerana iray fanatobiana katsaka misy katsaka enina taonina izay notàzany tamin'ny tànana. Manana hazo fihinam-boa am-polony maromaro izy, fàtana kitay, ary vokatra voatavo be mivolom-boasary vao avy notazana. 55 taona izy, manana maso tony sy malefaka ary tsiky saron-kenatra. Élida Benítez no vadiny, valo ny zanany ary dimy ny zafikeliny. Maty tany am-ponja ny zanany lahy iray ary nisy namono ny iray.
Fa zavatra iray no tsy ampy amin'i Mariano Castro : taratasin'ny (titre) tany izay namboleny efa an-taonany maro.
Indray marainan'ny ririnina – maraina mafana sady misy masoandro tahaka ireo andro hafa mandritra ny ririnina any Paragoay- any an-tsaha i Mariano Castro, tahaka ny fanaony mialohan'ny fiposahan'ny masoandro. Teraka tao an-tanànan'i Caacupé izy tamin'ny 1962, herintaona talohan'ny famoronana ny Ivontoeran'ny Fiadànana eny Ambanivohitra (IBR amin'ny fanafohezan-teny espaniola) sy ny fahalanian'ny Lalàna momba ny fambolena any Paragoay, fiovàna anankiroa izay nanova ny fiainan'i Castro.
Fony izy 2 na 3 taona teo ho eo, dia niala ny tranony tao Caacupé i Enrique rain'i Castro, , mba hikaroka tany hovolena hamelomana ireo zanany. Nanomboka tany akaikin'i Caaguazú izy, iray amin'ireo faritra tena voakasiky ny ady amin'ny fanavaozana ny fanànantany, hevitra iray nanakorontana tanteraka ny faritra tamin'ny taona 1970. Any Paragoay, nifanarahana tamin'ny mpanao didy jadona Alfredo Stroessner ny dingana amin'ny fanavaozana ny fanànantany mba hanomezana ampahan-tany govana tsy ara-drariny ho an'ireo mpomba azy sy ireo namany – mitotaly eo ho eo amin'ny 8 tapitrisa hektara eo ho eo – velarana mitovy amin'ny haben'i Panamà. Matetika fototry ny ady eo amin'ireo voanjo izay mamorona vondrom-piarahamonina vaovao sy ireo mihevitra fa tompon'ny tany ireo tany nomena tsy ara-drariny , antsoina hoe “tierras malhabidas” (tany azo tamin'ny maharary) any Paragoay. Nandeha lavitra kokoa niatsinanana ny rain'i Castro, fony nikaroka ny tany, talohan'ny nanorenany fonenana tany Curuguaty, vondrom-piarahamonina any amin'ny departemantan'i Canindeyú any amin'ny sisintany mampisaraka amin'i Brezila.
Am-polo taona maro aty aoriana, nanaraka ny dian-drainy i Castro : tamin'ny fahavaratra 1996, tamin'ny fiandohan'ny faha-30 taonany, dia nahita ny tany honenany izy, 150 maily (240 km mahery) miala ny renivohitr'i Paragoay, Asunción.
Tamin'ny 2013, io toerana io, izay antsoina ankehitriny hoe Yby Pytã I, miaraka amin'ireo vondrom-paritra ambanivohitra efatra no mivondrona mamorona ny tanànan'i Yby Pytã.
Ny fibodoana faritra no fomba voalohany hidirana amin'ny tany ho an'ny tantsaha paragoaiana. Taranaka telon'ny fianakaviana Mariano no nahazo ny taniny tamin'ny alàlan'ny fibodoana. Sary avy amin'i Melanio Pepangi. Nahazoana alàlana.
Nisy tompony ny tany fambolena ao Yby Pytã, saingy lazain'i Castro fa faritra tsy namokatra na inona na inona ireo tany ireo — ampahan-tany malalaka tsy nampiasaina– azo alàna amin'ny tompony ara-dalàna. Ankoatra izay, ho azy dia an'ny olona izay mampiasa azy ny tany ; mba hampiasàna izany, dia voalohany tsy maintsy mipetraka eo ianao.
Ny fibodoana tany no fomba lehibe hahafahan'ny tantsaha paragoaiana miditra amin'ny tany. “Tsy nisy fanorenam-ponenana na vondrom-piarahamonina eto amin'ity firenena ity izay tsy natomboka tamin'ny fibodoana,” hoy i Perla Álvarez, mpikambana ao amin'ny Fikambanana Nasionalin'ny Vehivavy Tantsaha sy Indizena (Conamuri). Ilay mpikaroka Mirta Berto, izay nanoratra boky maro momba ny olan'ny fitsinjaràna tany any Paragoay, dia niaiky fa maro amin'ireo tany eo an-tànan'ny tantsaha paragoaiana no azony tamin'ny alàlan'ny fibodoana.
Ahoana no hamoronana vondrom-piarahamonina
Refeso, havaho, tapaho, Diovy. Voleo, asao, otazy. Karakarao ny biby fiompy. Avereno. Tahaka izany no fibodoana tany, no fomba fananganana fonenana, no fomba famoronana tanàna. Fantatr'i Mario Carlos izany satria herintaona sy tapany no laniny nanaovana izany. Nandritra ny 18 volana izy no nandeha an-tongotra 20 maily avy any an-tranon'ny fianakaviany any Curuguaty nankany Yby Pyta tao anaty andian-jatovolahy lanaky ny asam-piavàna, fanapahana, fanadiovana mandreraka, ary mbola hiava, hanapaka ary hanadio.
Ho an'i Castro, an'izay miasa azy ny tany, ary mba hiasàna azy dia tsy maintsy bodoina izy. Sary avy amin'i Melanio Pepangi. Nahazoana alàlana.
Fandehanana lava sy sarotra ho an'i Castro izany. “Angamba hanontany ireo zanako, fa maninona aho ny tsy ao an-trano, fa nahoana no nilaozako ry zareo. Nandany tapabolana tany amin'ilay toerana aho. Rehefa tsy misy ny fitaterana, dia mafy ny mandeha an-tongotra lavitra, indraindray aho no lavitra ny tranoko fotoana maharitra”, hoy izy.
Fa nahazo endrika tsikelikely ilay toerana : nampivoatra ny faritra 25 acres (10 hektara eo ho eo) ananany ny vondrona tsirairay, araka ny lalàna mifehy ny Fambolena Paragoaina. Nanangana trano kely i Castro, bararata be no rindrina ary takelaka hazo vita tànana no tafony.
Fomba nentim-paharazana voakorontana
Tamin'ny 2012, tsy nisy antony tokony hisalasalàn'i Castro rehefa nanapa-kevitra ny hibodo tany vaovao mba hambolena sy hamelomana ny fianakaviany ireo zanany telo lahy, Néstor, Adalberto ary Adolfo. Nanaraka ny dian-drainy ry zareo tahaka ny nanarahan'i Castro ny an'i Enrique. Marina Kue, tany iray an'ny fanjakàna ery am-pitan'i Yby Pytã I no nofidian'ireo zanany ho fonenany vaovao, rehefa nahazo alàlana tamin'i Castro ry zareo.
Fa ny marainan'ny 15 jona 2012, nifanandrina tamin'ny mpitandro filaminana maherin'ny 300 izay niditra tao Marina Kue mba handrava ilay fonenana ry Néstor, Adalberto, Adolfo ary ireo mpikambana hafa tao amin'ilay toerana. Rehefa tonga ny alina, mpitandro filaminana enina sy tantsaha 11 no maty, isan'izany i Adolfo. Avy eo, nogadraina 18 taona an-tranomaizina i Néstor, taorian'ilay fitsaràna lava sy tena voatsikera izay nanadihadiana ny fahafatesan'ireo mpitandro filaminana.
Zanak'i Mariano Castro sy ny zafikeliny sary nalaina tany Marina Kue ny Sabotsy hariva taorian'ny fivorian'ireo mponina vaovao tao an-toerana. Sary avy amin'i Melanio Pepangi, nahazoana alàlana.
Taorian'ilay fifandonana ny 15 jona, izay fantatra amin'ny anarana hoe Curuguaty Massacre (fandripahana tao Curuguaty), dia nandao ny sahany i Castro mba hifantoka tanteraka any Asunción ho fanafahana ireo zanany Néstor sy Adalberto. Nandany taona maro izy tamin'ny fanoherana, fitenenana tamin'ny mpanao gazety, fanampiana tamin'ny fiarovana ny zanany lahy. Namidiny tsirairay ny ombivaviny 29 mba handoavana ny mpisolovavany sy ny vola lany amin'ny fitsaboana.
Fa amin'izao fotoana izao, niverina any amin'ny sahany i Castro. Niverina any Marina Kue ireo mponina, isan'ireny ny zanaka lahin'i Castro Adalberto sy Rodolfo. Miverina mifoha amin'ny 4: 30mn isa-maraina i Castro mba hamono masoandro, mihinana ny sakafo marainany izy ary mandeha any an-tsaha, any amin'ilay tany nofolahany mba hamokatra, izay andaniany ny androny mandritra ny fotoam-piasàna, fiavàna, ilay tany izay niadiany ho karakaraina nandritra ny 20 taona mahery.